[Maqaal] Astaamaha Hoggaamiyaha wanaagsan | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Faalooyinka Astaamaha Hoggaamiyaha wanaagsan
Hoggaamintu waxay muhiim u tahay nolosha iyo horumarka aadamiga, habsami u adeegsigeeduna wuxuu suuro-geliyaa in la gaaro halka la higsanayo, haddii aan hoggaamin jirin laguma guuleysan karo gaaritaanka halka maanka lagu hayo.Siyaabaha ay aqoon-yahannada faraha badani ku kala macneeyeen waxaa ka mid ah inay tahay saamayn lagu saameeyo dadka; taasoo lagu doonayo in lagu mideeyo tamarta iyo waxqabadkooda ku aaddan yoolal cayiman.
Hoggaaminta oo sidoo kale lagu fasiray madal is-dhex-galid, waxay abuurtaa xiriir ka dhaxeeya kan wax saameeyeey iyo kuwa la saameeyey oo ay ka dhigto kuwo mideysan oo leh yoolal ay wadaagaan, taasoo la oran karo inaysan wax kale ahayn, balse ay tahay xiriirkaas, loona baahan yahay inaan marna loo arkin inay tahay wax khasbid, sida ay dad badani qabi karaan, hoggaaminta iyo maarayntu isku mid ma aha, weyna kala duwan yihiin.
Hoggaamiyaha aynu u baahanay waa inuu lahaadaa sifooyinka soo socda:
Alle ka cabsiga.
Adkeysi iyo dulqaad
Inkastoo aanay jirin astaamo iyo tilmaamo gaar ah oo la isku wada raacsan yahay inuu lahaado qofka hoggaamiyaha ahi, haddana waxaa jira waxyaalo laf-dhabar u ah oo ay habboon tahay in lagu xusho hoggaamiyaha la dooranaayo, waxaana tilmaamahaas ka mid ah:
ALLE KA CABSIGA:Waa inuu yahay qof iimaan leh oo daacad ah. Waa inuu ku sifoobaan akhlaaqda iyo dhaqanka suuban ee diinta Islaamka iyo abuurka saxda ah ee Ilaahay qofkasta ku abuuray ka hor inta nolosha aduunyaddu aanay jiho kale u jeedin.
DAACADNIMO: Waa in waxa uu sheegayo uu daacad ka yahey oo ay afkiisa iyo uurkiisu wada jiraan. Waa inuu yahey ruux ka run sheega hadafkiisa si uu natiijo fiican uga gaadho waxa uu hiigsanayo.
DAREEN WADANINIMO: Waa inuu leeyahey dareen lahaansho (ownership) oo uu ka naxayo cida uu hogaaminayo ee aysan ku jirin maxaa kaa galey.
GEESINIMO: Waa inuu noqdo ruux ku dhiirada hirgalinta hadafkiisa iyo ka midho dhalinta ujeedooyinka hogaamineed. Mid leh geesinimo ay caqli ku dheehan tahey oo aysan ku jirin “qar iska tuur” iyo inuusan noqon mid halaaga naftiisa iyo cida uu hogaaminayo
ARAGTI DHEER: Hogaamiyuhu waa inuu leeyahey aragti dheer oo uu arki karo wax aysan dadka caadiga ah ee uu hogaaminayo arki karin. Haseyeeshee, waa in aragtidiisu noqoto mid macquul ah oo la dhaqan galin karo isla markaana ay bulshada ku hareereysan ka qeybqaadan karaan.Waa in aragtidu noqoto mid ka duuleysa garaadka, taqaya, aqoonta, iyo awooda cida uu hogaaminayo.Waa in aragtidiisu noqoto mid ka kasoo maaxaneysa aqoon iyo khirad ee aysan noqon mid ku dhisan jahli iyo malo-awaal.
ADKEYSI IYO DULQAAD: Howl walba waxey leedahey dhibaato, sidaas owgeed waa in hogaamiyuhu yeesho dhabar-adeyg iyo dulqaad ka badan midka dadka uu hogaaminayo. Waa inuusan noqon ruux jilicsan ama xanaaq badan oo ay cadhadiisu dhaafiso wadaag badan oo uu sameyn lahaa.
JOOGTEYN SHAQO: Si shaqadu u noqoto mid hirgasha waa in la joogteeyo oo aan laga caajisin. Hadafku ma aha in marba mashruuc la bilaabo kadibna dhexda lagu joojiyo ee hadafku waa in mashruuc walba la gaadhsiiyo hadafkii loo bilaabey.Taasi waxey ku iman kartaa oo kaliya in la sameeyo dabagal, ka war heyn, caawin, qalad-sixid, iyo in shaqada la joogteeyo.
8- WADA-TASHI: Hoggaamiyaha saxda ah waa midka la tashada dadkiisa iyo inta waxgaradka ah ee wanaaga kusoo kordhin karta. Waa inuusan noqon ruux kaligii taliye ah oo go’aanadiisa ku qasba dadka kale, haseyeeshee wixii qaldama dusha usaara dadka kale.
GO’AAN QAADASHO: Waa inuusan noqon ruux labac-labac ah oo ka baqa go’aan qaadashada ee uu noqdo ruux go’aanada qaata waqtiga ugu haboon iyo goobta ugu haboon.
DHIIRIGALIN LEH: Waa in hoggaamiyuhu noqdo mid dadka ku qancin kara aragtidiisa oo leh soo jiidasho iyo dhiirigalin badan. Mid lagu qanco hadalkiisa oo ay aratidiisu gali karto caqliga iyo qalbiga bulshada uu hogaaminayo.
DABACSANAAN LEH: Qalafsanaantu waxba ma dhisto. Sidaas owgeed waa inuu hogaamiyuhu yahey mid u badacsan bulshadiisa oo naxariis badan.
CADAALAD: Hoggaamiyuhu waa inuu noqdo mid dadkiisa u cadaalad sameeyo oo aan laheyn eex iyo ruux-jecleysi. Waa inuu u xaq-sooro cid walba isla markaana uu xigaal iyo shisheeye isku si ugu cadaalad falo. Sababta qormadan loogu dambeysiiyey cadaaladda ma aha iney ugu ahmiyad yar tahey ee waa iney ugu dambeyso akhriska qoraalka oo ay ku nagaato maskaxda akhristaha maadaama ay cadaaladdu gundhig u tahey wax walba oo uu hogaamiyuhu u qabanayo bulshadiisa.
W/Q:Daahir Cumar Faarax [Gaddaafi]
Previous articleEx-Somali spy deputy boss reiterates Somalis fighting in Tigray war, calls for probe
Next articleKhadiijo Diiriye “Farmaajo waa Madaxweynaha kaliya ee aan muddo xileedkisa dhammaan ee cadahay inuu soo noqonayo”